Tag: ịde blọgụ atụmatụ | Martech Zone
Tag: ịde blọgụ atụmatụ
Ọdịnaya: Igodo nke Killer Blog Posts
Fraịdee, June 6, 2014 Fraịdee, June 6, 2014 Douglas Karr
Kekọrịta oke ọdịnaya ga-abụ ihe na-akpali akpali ruo mgbe ebighi ebi maka ụlọ ọrụ iji wuo ọnụnọ ha n'ịntanetị, kesaa akụkọ ha, ma dọta, tinye ma ree ndị ahịa. Anyị na ndị ahịa abụọ na-arụ ọrụ ugbu a ndị atụmatụ ha agbanweela na ha anaghị ekekọrịta ọdịnaya anya site na mmekọrịta mmadụ na ibe ma ọ bụghị ka anyị mepee vidiyo ma ọ bụ nkọwa nkọwa… yana ịda mbà na olu ha, ndị ọbịa, na - n'ikpeazụ - na-eduga na emechi emekpala. Ọdịnaya bụ
Ihe ngosi B2B Lead Generation
Tozụ ahịa azụmaahịa (B2B) na-eduga n'ọgbọ site na okike ọdịnaya bụ atụmatụ dị egwu. Mepe, kesaa ma na-akwalite ọdịnaya dị n'ịntanetị nwere ike ime ka ikike gị too ma wulite mmekọrịta gị na ndị ahịa gị. Unbounce - ebe a na - eme onwe gị ọdịda ihu ala - mepụtara infographic a, B2B Lead Generation Manifesto iji kọwaa usoro ihe ịga nke ọma nke B2B na - eduga n'ọgbọ site na ịre ahịa ọdịnaya. Ihe omuma ahu na enye onu ogugu di nkpa nke kwadoro ihe okike site na ntinye akwukwo na ide akwukwo
Saturday, July 19, 2008 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Enwere nnukwu mkparịta ụka na Cranky Geeks nke tụgharịrị na TWIT n’izu a nke dị m nso ma bụrụ nke m hụrụ n’anya maka ndị nta akụkọ. Ndị na-ede blọgụ abụghị ndị odeakụkọ n'echiche ọdịnala nke okwu mana anyị bụ ndị nta akụkọ mgbe elere ya anya nye ndị ahịa. Mmezi dị mkpa na ekwesịrị ịme ya, mana ọ dabere na mmejọ emere. Ochie posts ka 'dị ndụ' na nsonaazụ ọchụchọ engine ma enwere